hataru/हटारु: पेरिसडाँडालाई एउटा पत्र
युद्ध सुरु हुनु केही दिनअघि ०५२ साल माघमा गोर्खाको गाईखुरका खोपबहादुर कँडेलको घरमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसवेलाका १७ केन्द्रीय सदस्यले बलिदानको सामूहिक संकल्प लिएका थिए । क्रान्तिमा सबै केन्द्रीय सदस्य सहिद भए भने पनि बाँचेका कार्यकर्ताले विस्तारित भेला गरेर नयाँ केन्द्रीय समिति बनाऊन् र क्रान्तिलाई जारी राखून् भनेर परिपत्र नै जारी गरिएको थियो । त्यति धेरै साहस, आत्मबल र संकल्प भएका तिनै नेता अहिले आपसी आरोपप्रत्यारोप र शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधको अन्धकारमा किन मग्न छन् ?
माओवादीले बाह्रबुँदे समझदारीमार्फत् युद्धको रथलाई शास्त्रको जमिनबाट सम्भावनाको जमिनमा उतार्ने साहसिक निर्णय लिएको थियो । खासमा त्यो एउटा त्यस्तो प्रयोग थियो, जसका बारेमा माक्र्स, एङ्गेल्स्, लेनिन, स्टालिन वा माओ कसैका पुस्तकमा प्रस्ट दिशानिर्देश थिएन । त्यसो त गठनका बीस वर्षमा यो पार्टी कहिल्यै प्रयोगको जोखिमसँग डराएन । ०४८ सालमा 'संसदको भन्डाफोर गर्न' संसदभित्र छिरेको माओवादीका पखेँटा अब सधैँका लागि सिंहदरबारभित्रै कुँजिए भन्ने धेरैको अनुमान थियो । 'रिम' समेत यही निष्कर्षमा थियो । तर, सांसद्हरू सिंहदरबारभित्र कांग्रेस-एमालेसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका वेला पार्टीका अरू कार्यकर्ता 'होलटाइमर' नामको थ्रिनटथ्री बन्दुक बोकेर युद्धको अभ्यास गरिरहेका थिए । र, ०५९ सालमा आइपुग्दा यो पार्टी अब बन्दुक छाडेर संवादको राजनीतिमा र्फकन सक्दैन भन्ने धेरैको मान्यता थियो । तर, ०६२ सालमा बाह्रबुँदे समझदारीको पहल लिएर यसले राजनीतिका ठुटे विश्लेषकलाई फेरि एकपटक निराश बनायो । माओवादी अहिलेसम्म सधैँ आशा र आशंकाको बीचबाट गुजि्रएको छ र यो फेरि एकपटक इतिहासको अदालतमा खडा छ ।
सिद्धान्त र आचारमा सहमत हुन नसकिएला तर माओवादी कुनै सामान्य पार्टी होइन । लिवाङदेखि पेरिसडाँडाको यो यात्रा माओवादीले खोला होइन, आफ्नै रगतको भेल तरेर पूरा गरेको हो । पेरिसडाँडाका जगमा ढुंगा होइन, बलिदानका अनन्त कीर्तिमान छन् । 'अपरेसन किलो सेरा टु' ताका प्रहरीले सिंगै गाउँ जलाएको खाराको खरानी अझै उडिसकेको छैन । कुख्यात भैरवनाथ गण र अन्यत्रबाट बेपत्ता पारिएका कार्यकर्ता भेटिएका छैनन् न तिनका अभिभावकका आँखा ओभाइसकेका छन् । मुलुकका चारै हजार गाविसमा माओवादीका रगतका टाटा अझै छन् । थुप्रै कार्यकर्ताका शरीरबाट अहिले पनि गोलीका छर्रा निकाल्न बाँकी छ । दैनिकजसो सहिदगाथाका एकपछि अर्का प्रकाशनको विमोचन हुने पेरिसडाँडा नै यदुवंशी लडाइँको केन्द्र किन बनिरहेको छ ?
मोहनविक्रम सिंहले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नराम्रो प्रवृत्ति बसाले । माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन र माओका उक्तिहरूको मालामा उनेपछि निजी कुन्ठाहरूसमेत 'सिद्धान्त' हुन्छन् भन्ने प्रवृत्तिका उनी पितृपुरुष हुन् । फिलिपिन्सको माक्र्सवादी न्यु पिपल्स आर्मी चवालीस वर्षदेखि लडिरहेको छ । भारतमै माओवादीहरूले बन्दुक उठाएको चार दशक हुन लाग्यो । कोलम्बियाको माक्र्सवादी हिंसाले पनि चार दशक नाघिसक्यो । रचनात्मक हुन नसक्दा तिनले न क्रान्तिलाई विस्तार गर्न सके, न यसको दिशा पहिल्याउन । मोहनविक्रमले सधैँ क्रान्तिको गफ दिए तर कहिल्यै क्रान्ति गरेनन् । यसैले उनलाई क्रान्त्िाको नयाँ भाष्यको आवश्यकता नै परेन । तर, माओवादीले त नेपाली क्रान्तिको भाष्य लेख्नु छ । यति विभाजित र विखण्डित पार्टीले यो ऐतिहासिक कार्यभार कसरी पूरा गर्न सक्छ ?
न एकता न विभाजनको अहिलेको अवस्थाले माओवादीलाई स्वतः विघटनतिर लैजानेछ । र, विभाजनपछि यो पार्टी केवल टुक्राटुक्रा हुनेछैन बरु ११ सेप्टेम्बर, २००१ मा अमेरिकाका जुम्ल्याहा टावरझैँ एकैपटक खरानी हुनेछ । माओवादीको नियति केही नेताहरूको निजी नियति हुन्थ्यो भने तिनलाई राजनीतिको खालमा जुवा खेल्ने छुट हुन सक्थ्यो तर दुर्भाग्यवश माओवादीको नियति यतिखेर मुलुक र मुलुकबासीको नियतिसँग जोडिएको छ । अहिले आआफ्ना घाउ कन्याइरहेका नेताहरूलाई हेक्का हुनैपर्छ, उनीहरू भोलि जनता र इतिहासको अदालतमा खडा हुनुपर्नेछ । सहिदको अदालतमा, जनसेनाको अदालतमा, अंगभंगको अदालतमा, बेपत्ता परिवारको अदालतमा, समर्थक र शुभेच्छुकको अदालतमा ।
माओवादी अहिले एकसाथ चारवटा स्टेसन टिपिरहेको रेडियोजस्तो भएको छ । रथ अघि र घोडा पछि हुन थालेपछि राजनीतिमा निकै ठूलो नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ, जुन अहिले माओवादीमा देखिएको छ । अन्तरविरोधहरू अतिशत्रुतापूर्ण भएका छन् । एकातिर कोटवाडादेखि चिहानडाँडा र दोरम्बादेखि भैरवनाथ गणसम्मका कथा छन्, अर्कातिर शान्तिप्रक्रियालाई दिशा दिनैपर्ने बाध्यता । प्रचण्ड अहिले दोहोरो घेराबन्दीमा छन् । एकातिर केहीलाई शान्तिप्रति प्रचण्डको नियतमाथि शंका छ । अनि केहीलाई क्रान्तिप्रति उनको नियतमाथि शंका छ । शान्त्िा र क्रान्तिको दोहोरो झन्डा बोकेको कमान्डरका जटिलता र बेचैनी अहिले उनमा प्रस्ट देखिन्छ । यो एउटा व्यक्तिको होइन, क्रान्तिको बेचैनी हो । माओवादीले निकै छिटो यो बेचैनीको हल खोज्नु छ ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको प्रतिनिधि न राष्ट्रपति छ, न उपराष्ट्रपति, न प्रधानमन्त्री, न सभामुख, न संवैधानिक समितिको प्रमुख । फेरि पनि संविधानसभाको सफलता वा असफलतालाई माओवादीको सफलता वा असफलतासँगै दाँजिनेछ । यतिवेला माओवादीको आन्तरिक कलहले माओवादीमात्रै होइन, देशकै राजनीति प्रभावित भएको छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण अझै पनि दोबाटोमै छन् र माओवादी आन्तरिक र बाहिरी घेराबन्दीमा । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष रहेको माओवादीका गुटहरूमा भने यो घेराबन्दीको खासै चिन्ता देखिन्न, बरु आन्तरिक संघर्ष नै प्रधानजस्तो देखिन थालेको छ ।
क्रान्तिले सधैँ सेवकहरूको सेवा गर्दैन । इरानको सोभियतसमर्थक कम्युनिस्ट पार्टी तुदेहलाई लागेको थियो- सन् १९७९ को इरानको इस्लामिक क्रान्ति यसकै हो । आरम्भमा त्यो क्रान्ति वामपन्थी नारामा लडिएको थियो । सुरुमा त्यसको नारा थियो- 'नुन, कार र आजादी' अर्थात् रोटी, काम र स्वतन्त्रता । तुदेह त्यो क्रान्तिलाई सहयोग र समर्थन गर्ने इरानको एकमात्र राजनीतिक दल थियो । खुमेनीको इस्लामिक क्रान्तिलाई सोभियत अनुहार दिने पनि तुदेह नै थियो र उसलाई निकै पछिसम्म 'क्रान्ति आफ्नो हो' भन्ने भ्रम थियो । तर, दुई वर्ष नबित्दै खुमेनी तुदेहमाथि खनिए र इरानमा साम्यवादीहरू धराशयी भए । माओवादी विभाजित भयो भने त्यो अर्को तुदेह हुनेछ ।
पेरिसडाँडा खतरामा छ । लोकतान्त्रिक उपलब्धि खतरामा छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका नारा खतरामा छन् । तर, माओवादीका नेताहरू कोही क्रान्तिका नाममा, कोही शान्तिका नाममा यी खतराका सहयोगी भएका छन् । यो इतिहासको बिडम्बना हो कि माओवादीको, क्रान्तिको बिडम्बना हो कि शान्तिको ? केवल इतिहासले मात्र जवाफ दिन सक्छ ।